juillet 2015 – filazantsaramada
KATSAHO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANY!
« Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa rehetra dia ho vokisako. » Jeremia 31:25 Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, be fitiavana Izy, fa saro-piaroka tsy mahazaka ny fijangajangana amin’ny andriamani-kafa. Talohan’izao fotoana eto izao dia nampiditra andriamanitra isankarazany ny Isiraely ka tafiditra tao avokoa ireo karazan’andriamanitra toa an’i Bala sy Astarta sy Moloka […]
Publié parfilazantsaramada juillet 30, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur KATSAHO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANY!
Collège sy Lycée Privé Amy Fiderana Ankadivoribe
Nofaranana tamin’ny fiarahana nijery horonan-tsarimihetsika ny taom-pianarana. Ny Feon’ny Filazantsara (FF) dia mitondra ny anjara birikiny. mandrakariva, eo amin’ny asa Fitoriana ny Filazantsara anivon’ny Sekoly. Ho famaranana ny Taom-pianarana 2014-2015 àry dia nanasa ny FF ny Collège Privé Amy sy ny Lycée Privé Amy Fiderana izay mpiara-miasa amin’ny FJKM Ankadivoribe Famonjena ny handefasana horonan-tsarimihetsika. Tontosa […]
Publié parfilazantsaramada juillet 29, 2015 septembre 11, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Collège sy Lycée Privé Amy Fiderana Ankadivoribe
TSY TONGA AHO HANDRAVA FA HANATANTERAKA!
« Efa renareo fa voalaza hoe: « Aza mijangajanga », Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady. » Matio 5:27-28 Raha izao teny eto izao dia ao anatin’ny toriteny nataon’i Jesosy teny antendrombohitra, ary manambara ny amin’ny fitondran-tena ateraky ny finoana. Raha fintinina ny didi-folo dia mizara roa: […]
Publié parfilazantsaramada juillet 24, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY TONGA AHO HANDRAVA FA HANATANTERAKA!
Fanentanana momba ny fianarana Soratra Masina (FF)/FJKM Imeritsiafindra Filadelfia
“Aza manome fitoerana ho an’ny devoly” Efesiana 4:27 Tsapa amin’izao fotoana izao fa mandalo fotoan-tsarotra ny isam-batan’olona, sahirana miatrika ny andavan’androm-piainany noho izany ny tsirairay. Vokatr’izany dia maro no milaza fa tsy manana fotoana hianarana na handalinana ny Tenin’Andriamanitra. Efa nisy fotoana nanentanana ny Sampana rehetra ao amin’ny FJKM Imeritsiafindra Filadelfia indrindra ny Sampana Tanora […]
Publié parfilazantsaramada juillet 24, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fanentanana momba ny fianarana Soratra Masina (FF)/FJKM Imeritsiafindra Filadelfia
« Dia hoy Jesosy tamin’i Simona: Aza matahotra; hatramin’izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. » Lioka 5:10b Ny tantara ambara eto dia ny amin’i Jesosy mampianatra ny vahoaka sy ny amin’ny nilazan’i Jesosy an’i Petera ho mpanarato olona. Raha ny tantara no dinihina dia nasehon’i Jehovah Andriamanitra ny Zanak’Isiraely ny maha tena Andriamanitra Azy […]
Publié parfilazantsaramada juillet 17, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPANARATO!
Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora.
Mitohy ny fanentanana eny amin’ny Sekoly ambony Zava-dehibe tokoa ny fampandrosoana ny ara-panahy eny anivon’ ireny Sekoly Ambony ireny. Tafiditra indrindra amin’ny Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora izay vokarin’ny FF indrindra izany. Koa ny Sekoly ambony tsy miakina ISPPS izay manofana ho mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux) dia efa nifandray tamin’ ny FF nanomboka […]
Publié parfilazantsaramada juillet 16, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora.
« Aza mitsara, mba tsy ho tsaraina hianareo, Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. » Matio7:1-2a Eo amin’ny fiainana andavan’andro, dia sarotra tokoa ho an’ny olona ny miatrika izany fitsarana izany. Eo amin’ny fiainana maha kristiana, dia izao raràn’i Jesosy Kristy izao ny fitsarana ny olon-kafa! Ny Epistily ho an’ny Romana 3:12b « Tsy misy izay […]
Publié parfilazantsaramada juillet 10, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AZA MITSARA!
Fanolorana diplaoma ho an’ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)
“Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao” Apokalypsy 3:11b Misaotra an’Andriamanitra fa dia nisy 17 mianadahy mianaka indray no nahavita FSMI na ny “Cours Biblique par Correspondance” atolotry ny Feon’ny Filazantsara (FF) tao amin’ny FJKM Isoavina Fihavaozana (SPAA 12) izay iandraiketan-dRtoa Rakotomalala Nivomboahangy, Mpitandrina. Ny Alahady 05 Jolay 2015 nandritra ny fotoam-pivavahana […]
Publié parfilazantsaramada juillet 9, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fanolorana diplaoma ho an’ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)
« Ary hianareo dia novelominy, fony mbola matin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, » Efesiana 2:1 Ny Soratra Masina dia manambara mazava fa fahafatesana no tambin’ny ota, izany hoe ratsy tokoa ny vokatry ny ota: FAHAFATESANA. Ny fahadisoana moa dia mifanakaiky amin’ny ota ihany. Ny atao hoe fahotana dia fandikana ny didin’Andriamanitra amin’ny fivavahana kristiana. – Miteraka fahatezeran’Andriamanitra […]
Publié parfilazantsaramada juillet 3, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NOVELOMINY:
Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo: “Henoy ny feony”
“Fiainana ny vavaka” Mitohy sy miroso hatrany ireo lohahevitra velabelarina isam-bolana ao amin’ny fandaharana “Henoy ny Feony”, vokarin’ny FF, izay mandeha amin’ireo onjam-peo vitsivitsy mahazatra antsika manerana ny Nosy. Fampahatsiahivana ihany no ilazana etoana fa ny volana Jona 2015 teo dia niompana indrindra tamin’ny “VAVAKA” izany. Toy ny mahazatra moa dia tanora kristiana (zandriny, zokiny), […]
Publié parfilazantsaramada juillet 2, 2015 juillet 2, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo: “Henoy ny feony”